Uhlobo Lwamadoda 2020: Iveki ephelileyo, iiCelebs ziphakamise iTempo ngokuJongeka okutsha
Uluhlu oluGqwesileyo: Uluhlu lweveki ephelileyo, Abantu abadumileyo abaphakanyise i-tempo ngokujonga okutsha
SI-tyle ihlala iziko lokuzonwabisa. Oku kunjalo ngenxa yokuba wonke umntu unomdla kwisitayela esihle, ngakumbi, xa impembelelo ivela kwabo bayithandayo. Abantu abadumileyo base-Afrika bayakuqonda oku rhoqo basebenzise amandla esitayile ukwakha iimpawu zabo.
Le nyaniso iphinde yabonakala ngokukhutshwa kweengubo ezimangalisayo ngabantu abadumileyo base-Afrika kwiveki ephelileyo.
Isuka kumyili oyili lo Mzantsi Afrika Sisityebi Mnisi Kwinkolelo yaseTanzania IDondond Platnumz, ukunxiba iimbaleki kulawule imbonakalo yesitayile kwiveki ephelileyo kwaye imbonakalo emi ngaphandle zezona zazinamandla nesibindi kwaye zinengqondo okanye zingenakuguquka.
Ukuphosa imbonakalo yeembaleki eziphezulu, imvumi yaseMzantsi Afrika, Zulu Mkhathini Wayeyingelosi nje kuyo yonke into emhlophe. Wayenxibe i-jean emhlophe awayehambelana ngayo ne-turtleneck emhlophe qhwa. Emva koko wabeka ijekethi emhlophe enezintlu zegraffiti emnyama phezu kwayo ngaphezulu kwe turtleneck ephezulu. Ukuqukumbela ukujonga ukubukeka nje, uZulu wahamba kunye neelenti ezimhlophe nezimnyama ezihambelana kakuhle nejacket kunye nempahla yokunxiba xa iyonke.
Kule veki iphelileyo, abantu abadumileyo abangamadoda kwi-Afrika iphela basibonise ukuba kunjani ukuba neliso elicokisekileyo ngesitayile, kwaye sakhuthazeka kakhulu ngumbonakalo ofanelekileyo weRave.
Nazi izidlo zamadoda ezizinxibe kakuhle kakhulu e-Afrika kwiveki yonke…
URich Mnisi - uMzantsi Afrika
. isitayile samadoda 2020
Korede Bello - eNigeria
UCassper Nyovest - uMzantsi Afrika
UDenola Grey - eNigeria
U-Ommy Dimpoz - eTanzania
UTshego Koke - uMzantsi Afrika
UZulu Mkhathini - uMzantsi Afrika
Mohale Motaung - uMzantsi Afrika